Medicare: Goorma La Codsado - Bogga rasmiga ah ee CHPW website-ka blog ee rasmiga ah ee CHPW | Awooda bulshada Barta rasmiga ah ee CHPW
Medicare | Noofambar 22, 2021
La dhejiyay Noofambar 22-deeda, 2021 - Waqtiga Akhriska: 3 Daqiiqad / s
Waqtiyada Medicare iyo waqtiyada kama dambaysta ah waa inaad ogaataa
Hadaad aqriso anaga Tilmaamaha bilowga ah ee qorshayaasha Medicare, waad garanaysaa aasaaska waxa jira iyo nooca qorshe caafimaad ee kugu habboon. Waxaa laga yaabaa inaad horey u dooratay qorshe aad rabto.
"Marka goormaan dalban karaa qorshahayga Medicare?" waxaa laga yaabaa inaad is weydiiso.
Hagaag, taasi waxay ku xidhan tahay qofka aad tahay, da'daadu, iyo haddii aad hore u lahayd qorshaha caafimaadka Medicare. Waxaan halkaan u joognaa inaan ku dhex soconno aasaaska.
Waxaa jira saddex waqti oo waaweyn oo aad iska qori karto Medicare:
Muddada Diiwaangelinta Hore
Muddada Isqorista Guud
Muddada Is-diiwaangelinta Sannadlaha ah
Waa muhiim inaad ka digtoonaato waqtiga si aad u hubiso inaad leedahay caymis markaad u baahan tahay iyo inaad iska ilaaliso kharashyada soo daaha.
7 bilood, inta badan sanadka dhexdiisa waxaad buuxinaysaa 65
Muddada Diiwaangelinta Bilowga ah (IEP) waxay dhacdaa marka ugu horreysa ee aad xaq u yeelato inaad iska diiwaangeliso Medicare. Dadka intooda badan, waxaad xaq u yeelanaysaa Medicare bisha aad 65 jirsatay. Si kastaba ha ahaatee, IEP-gaagu wuu ka dheer yahay bishaas oo keliya.
Muddadaada isdiiwaangelinta hore runtii waa 7 bilood:
Muddadan waxaa ku jira 3 bilood ka hor dhalashadaada 65aad, bisha dhalashadaada, iyo 3da bilood socda dhalashadaada. Inta lagu jiro 7-da bilood, waxaad iska qori kartaa Medicare Advantage ama qorshaha Medicare ee Asalka ah. Caymisyadaadu waxay bilaaban doonaan ka dib markaad 65 jirsato.
Si ka duwan xilliyada isdiiwaangelinta kale, kani adiga ayuu gaar kuu yahay. Oo waxay dhacdaa hal mar oo kaliya! Haddii aad awooddo, waa inaad iska diiwaan gelisaa Medicare inta lagu jiro IEP-gaaga si aad isaga ilaaliso inaad bixiso ganaaxyada dambe.
Oktoobar 15 - Disember 7
Diiwaangelinta Sannadlaha ah ee Medicare waxa ay bilaabataa Oktoobar 15 waxayna dhammaanaysaa Diisambar 7. Taariikhahani waa isku mid sanad walba, markaa calaamadee jadwalkaaga!
Tani waxay fursad u tahay dadka horay uga diiwaangashanaa Medicare si ay isbedel ugu sameeyaan qorshahooda. Haddii aadan weli isdiiwaangelin Medicare, waxaad u baahan doontaa inaad sugto ilaa Muddada Diiwaangelinta Bilowga ah (eeg kor) ama Muddada Diiwaangelinta Guud (hoos eeg).
Qorshayaasha Medicare waxay inta badan ku dhawaaqaan faa'iidooyinkooda cusub iyo isbeddelada qorshahooda Oktoobar 1, taas oo ku siinaysa laba toddobaad inaad dib u eegto oo aad isbarbardhigto qorshooyinka ka hor intaysan bilaabmin xilliga diiwaangelinta.
Diiwaangelinta sanadlaha ah waa Oktoobar 15 ilaa 7 December.
Ma jeclaan lahayd inaad wax badan ka heli lahayd qorshahaaga Medicare? Tani waa wakhti fiican oo lagu sahamiyo fursadahaaga. Khubarada Medicare-ka ee CHPW ayaa ku caawin kara.
Janaayo 1 - Maarso 31
Aynu nidhaahno waxaad gaadhay Diisambar 8, ka dib marka ay dhammaato Diiwaangelinta Sannadlaha ah ee Medicare, oo aad go'aansato inaad rabto inaad beddesho qorshahaaga. Ma daahday?
Tusaale ahaan, ka waran haddii aad ku qoran tahay Qorshaha Faa'iidada Medicare oo aad la kulanto qiimo korodh? Ama ka waran haddii faa'iidooyinka aysan ahayn wixii aad rajayn lahayd?
Looma baahna inaad xanaaqdo: Haddii aad ogaato wixii ka dambeeya Diseembar 7 inaad rabto inaad sameyso isbeddel qorshe ah, waxaa jirta fursad labaad oo isdiiwaangelin ah, oo la yiraahdo Muddada Diiwaangelinta Guud (GEP), laga bilaabo Janaayo 1 ilaa Maarso 31. Inta lagu jiro GEP, ka-faa'iideystayaasha Medicare waxay leeyihiin hal hal. -wakhti fursad aad ku dooran karto qorshe kale oo Medicare ah.
Waxaad u beddeli kartaa qorshe ka duwan Medicare Advantage, ama waxaad iska tuuri kartaa Medicare Advantage for Original Medicare. Haddii aad dhaaftay Muddada Isdiiwaangelinta Bilowga ah, waxaad iska qori kartaa Medicare inta lagu jiro GEP (laakiin waxaa laga yaabaa inaad bixiso lacag daahsan).
CHPW waxay haysataa ilo dheeraad ah si ay kaaga caawiso helida qorshaha kuugu fiican:
Our Khubarada Medicare waxay kala hadli karaan fursadahaaga, ka jawaabi karaan su'aalaha, iyo xitaa kaa caawin kara inaad is-diiwaangeliso. Na soo wac, ballan ballan, ama joogso saacadaha rugaha caafimaadka.
Fiiri boggayaga Faa'iidada Faa'iidada Medicare ee CHPW si aan wax uga ogaano qorshayaashayada.
Baro wax ku saabsan Farqiga u dhexeeya Medicare Advantage iyo Medicare asalka ah, gudaha muuqaal 2 daqiiqo ah oo leh khabiir shati leh, Brisa Guajardo.
« Khayraadka ka soo kabashada fatahaada
Soo dejinta Sonkorowga: Sidee Tech u caawin kartaa »